Exynos 990: Samsung bu ihe nhazi ohuru ugbu a | Gam akporosis
Exynos 990: Samsung bu ihe nhazi ohuru
Ọ bụrụ ụnyaahụ ekpughere ya na n'oge na-adịghị anya anyị nwere ike ịtụ anya nhazi site na Samsung, ụdị ihe atụ a adịworị ama. Firmlọ ọrụ Korea na-ahapụ anyị Exynos 990. Ihe oru ohuru a site na ụlọ ọrụ ga-arụ ọrụ na ekwentị ha na 2020, ọ nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na nhazi nke anyị hụrụ na Galaxy Note 10, ya mere ọ na-ekwe nkwa na ọ ga-adọrọ mmasị.
Otu akụkụ kachasị mkpa nke Exynos 990 bụ na arụpụtara ya na 7 nm. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ na Samsung emegoro ahụ, ọ hapụrụ anyị ọnwa ole na ole gara aga na mgbapụta mbụ ya arụpụtara n'ụzọ a. Lọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ doro anya.
N'okwu a, a na-eji 7 nm egwu ultraviolet lithography. Exynos 990 a na-eji ARM Mali-G77 MP11 GPU, nke na-enye ya ohere inwe 20% arụmọrụ ka mma ma e jiri ya tụnyere ndị nhazi ọgbọ gara aga. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ mgbawa ka mma mgbe a bịara n'ịkpọ ekwentị.
NPU enweghị ike na-efu na nke a. Otu agbakwunye n'ime ihe nhazi, ya na igwe nhazi dijitalụ (DSP). Ọzọkwa, mgbanwe dị mkpa bụ na na nke a ọ nwere isi abụọ. Mgbe nkwado ahụ, ọ bụ maka DDR5 RAM n'okwu a, dịka ụlọ ọrụ ahụ na-akpọsa.
Exynos 990 nwere nkwado maka ihe mmetụta 108 MP, n'ihe banyere otu ihe mmetụta. Nakwa na nkwado maka njikọta abụọ nke 24.8 + 24.8 MP, dịka ihe a mụtara. N'ihe banyere nkwado ihuenyo, anyị nwere ike ịnweta 120 Hz ume ume na nke a, nke bụ ihe ọzọ dị mkpa.
A na-atụ anya ka mmepụta ngwaahịa Exynos 990 ga-aga ịmalite na njedebe nke afọ a. Anyị ga-ahụ ha na ụfọdụ ekwentị dị elu site na mbido afọ ọzọ. Ma eleghị anya, na nso nso nke Galaxy S11, ma ọ bụ na ụfọdụ n'ime ha. Mana ụlọ ọrụ ahụ anaghị akwado ihe ọ bụla gbasara ekwentị ha ga-eji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Exynos 990: Samsung bu ihe nhazi ohuru
Gam akporo Auto na-arụ ọrụ ikuku na ọtụtụ Latin America mba
Emeputara Motorola One Macro na Spain